Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa ka dhacay Guriceel
Maxaa ka dhacay Guriceel
Posted by ONA Admin	/ November 2, 2011
Maalmahan shabakadaha Somalida qaar ka mid ah ayaa waxay qorayeen inay ku dagaalameen agaagarka Guriceel ciidan ONLF ah iyo kooxaha ahlu-suna sheegta. Waxayna intaa raacinaya (.. Dagaalo kulul ayaa wuxuu labada dhinac uu ku dhex maray deegaanadaasi, kadib markii ay isku adeegsadeen qeybaha kala duwan ee hubka, isla-markaana waxay dagaaladu sababeen khasaarooyin kala duwan. Dhacdo news. )
Inay jirto arintaa iyo inkale muhiim ma’aha sababtoo ah ciidanka ONLF wuxuu ka hawlgalaa xuduuda u dhexeeya labada dal, iyadoo waliba bishii October uu jiray weeraro xoogan oo CWXO ay ku qaadayeen maxaysatada Wayaanaha ka dib markay baneeyeen goobaha dagaalka maxaysatadii hawaarinta.
Waxaan arimahaa ka wareysanay taliyaha qaybta ka hawlgasha aaga Shilaabo oo yidhi; “waxaa jiray dagaala badan oon ku qaadnay ciidanka gumaysiga fadhiisamdooda ama qaar socda, hasa ahaatee ciidan ONLF ah iyo kuwaa sheeganaya sunna wal-jmaaca oo dagaal aan ognahay uu ku dhex maray aagaa ma jiro. Hadday soo raaceen ciidamada cadawga oy la socdeen dagaaladaa ma ogin mana kala saari karno”
Wuxuu intaa raaciyay taliyaha in ciidanka Itobiya oo meela kala duwan laga soo qafaalay uu hadda aad u jabay mooralkooda, dagaalkii oo ku daba dheeraaday iyo guuldarooyin isdaba joog ah oo soo gaadhay darteed. Marka waa laga yaabaa inay wataan Wayaanaha qorshe cusub oo kooxdan sunada sheeganaya ay ku hawlgalinayaan. Waxaanse uga digaynaa buu yidhi taliyaha; ” Sunna wal-jamaaca inay faraha la soo galaan halganka shacabka Somaalida Ogadenya. Hadday isku dayaan arintaa oy noqdaan hawaarin cusub, waan naqaanaa sidaan ula xaali lahayn.” Ayuu yidhi taliyaha qaybta.
Shacabka Somaliyeed oo lagu yaqaano horujeednimo ka soo jeeda dhaqankii reerguuranimo ee beenta, is-jalaafaynta iyo khayaanada aan aqoonin ayaa waxaa 25kii sanee la soo dhaafay saynta isugu wada xidhay sirdoonka Itobiya. Hadafka Itobiya ay ka leedahay Somaliya kamaba aanay qarnin way u sheegtay in aanay ogolayn dawlad Somaliyeed oo danaheeda is-hortaagta.
Laga bilaabo maalintuu u galay Colonel Cabdulaahi Yusuf ilaa maantadan aan joogno, Itobiya hadafkeedu wuxuu ahaa inay ka hesho Somlalida qaar iyada u adeega oo kala shaqeeya burburinta qaranimo Somaliyeed, wayna ku guulaysatay sida muuqata. Siyaasiyiinta Somaliyeed ee kala jooga maamulada Hargaysa, Boosaaso, iyo Muqdishu iyo qaar kaloo la dhisi doonaba waxay u joogaan fulinta hadafkaa Itobiya waxayna si toosa ah ugu shaqeeyaan Itobiya iyagoo ilaashanaya kursi beenaadka ay ku fadhiyaan iyo maalka ay boobayaan.
Waxyaabaha la yaabka leh, een dhaqan u ahaan jirin Somalida, diinta ay sheeganayaana ka soo horjeeda, hasa ahaatee ay hadda Somalidii aqbashay oy ka dhaadhacday waa qirashada ah waxaan qabanay dad Itobiya ka soo horjeeda oon u gacan galinay ciidamada Itobiya. Waxaa ka sii yaab badan marka ay kuwa falkaa samaynaya ay sheegtaan inay yihiin urur diineed.
Waxay Itobiya ku guulaysatay inay ku shaqaysato qaar badan oo culumo diineed loo haystay. Qaar lahaa waxaan nahay salafiyiin sida Ibraahim dheere (xagga siyaasadda) iyo Shakuul (xagga dhaqaalaha), iyo kuwii sheeganayay suufiya ee la baxay Sunna wal-jamaaca ayaa amaanta u kala tartamaya Itobiya oo mid walba leeyahay anagaa Itobiya uga daacadsan kuwa kale oo la soo dagaalamayna ONLF. Qofwalba wixii loo uumay umbaa loo fududayn.